Ogaden News Agency (ONA) – Hambalyo Sanadguurada 5aad ee ka soo wareegtay aas-aaskii O.Y.S.U‏
Hambalyo Sanadguurada 5aad ee ka soo wareegtay aas-aaskii O.Y.S.U‏
Mudanayaal & Marwooyin, anigoo ku hadlaya magaca ururka Midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadenya ee OYSU, waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak dhamaan ummadda Islaamka khaas ahaan S.Ogadenya. Waxaan Salaan iyo Bogaadin udirayaa shacabka gobanimo-doonka ah, Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya iyo Hoggaanka Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadenya oo ugu horeeyo gudoomiyaha JWXO Mdn. Admiral Maxamed Cumar Cismaan. Waxaan sidoo kale Hambaliyo iyo Bogaadin diiran hawada umarinayaa dhamaan Xubnaha qaaliga ah ee ururka Midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadenya ee OYSU oo maanta 5 jirsaday.
Ururka ayaa waxaa lagu aasaasay dalka Denmarka 27kii bishii Juun ee sanadkii 2010, halkaasoo lagu mideeyay dhalinyarada iyo ardayda Ogadenya ee ku nool dibaadda dhulka hooyo si’ loo xoojiyo cududda iyo dhaqdhaqaaqa geedi socodka halganka lagula jiro gumaysiga gaamuray ee Itoobiya. Waxaa shirweynaha ka soo qaybqaatay dhamaanba da’yartii iyo ardaydii u heelanaa qadiyadda Ogadenya kuwaas oo xiligaa magacyo kala duwan xambaarsanaa sida OYN, OEYL, OYF, SOYA iyo OYU.
Taniy aasaaskii, waxaa uqabsoomay ururka arrimo badan oo halganka iyo shacabka gobanimo-doonka ah gaadhsiiyay fa’iido iyo hor usocod lixaad leh. Taniyo midayntii ururka, waxaa ku soo kordhay halganka waxtar iyo barnaamijyo qiimi badan ooy kamid yihiin balse aynan ku koobneen Kow; In kaalintii duleelshay ee looga baahnaa dhalinyarada iyo ardayda Ogadenya ay awdeen taasoo horraan la tabayay inay maqantahay, iyadoo la aaminsanyahay halgan aanan lahayn da’yar inuu Gablan yahay. Labo; Waxay la yimaadeen barnaamijyo ay ku midaysanyihiin oo ku aadan dhanka Abaabulka, Samafalka, Suuq-gaynta Qadiyadda iyo in Hiiliyo Hoo la garab istaagaan ha’adaha kala duwan ee halganka sida Warfaafinta iyo Jaaliyaadka reer Ogadenya iyagoo ku midaysan mabda’ iyo qorshe. Sadex; Dhalinyaradu waxay bud dhig unoqdeen taniyo maantana tusaale toolmoon uyihiin dhamaan dhalinyarada reer Ogadenya daliyo dibadba iyagoo kasbaday jiil cusub oo ku baraarugsan higsiga shacabka dulman ee Ogadenya.
Halgamayaal, anooy sharaf ii tahayah inaan ka tirsanahay masuuliyiinta ururka dhalinyarada iyo ardayda Ogadenya ee OYSU ayaan waxaan jeclahay inaan fariin muhiim ah la wadaago dhamaan bulsho weynta gobanimo-doonka ah ee Ogadenya khaas ahaan Midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadenya.
Waa midda horee, waxaan bogaadin shacabka geesiga ah ee reer Ogadenia ee muujiyay Isku filnaansho iyo Mintidnimo kana soo gudbay hagardaamooyin walboo cadawgu dhankooda ku soo halgaado, taasoo astaan lagu yaqaan u ah shacab walboo gumaysi ka libin hela. Waxaan idin ku dhiiri galin in guntiga dhiisha la iskaga dhigno oo aan isdaba raacinno gumaysiga gaamuray iyo shayaadiintiisa inagoo Alle talo saaranayna, aaminsan awoodda shacabkeenu leeyahay, hoggaaminta rug cadaaga ah ee aynu leenahay, wiilasheena hadhiyo habeen jiida hore heeganka ku ah iyo wiliba ururadeena bulshada ee noo hanaqaaday intuba.
Sidoo kale, waxaan jeclahay inaan usoo jeediyo ardayda, aqoonyahanka iyo dhamaan dhalinta reer Ogadenya ee jecel ciidooda hodanka ah inay xor ugu damaashaadaan; waa inaan yaqiinsanno halgankeenu inuu xaq yahay Allena ka soo badbaadiyay halisyo badan, mustabalkana uu ka samata bixin doono halgaadaha cadawga Inshallah. Adigo og in laguu baahanyahay, cidda kuu bahanna tahay dadkaaga, ogna halgankaagu inuu xaq yahay, Allena kuu maciin yahay soo damiir xumi ma aha inaad marti ka noqoto hawsha gurigaaga? Kolka aad tahay qofka shacabku sugi, adigu yaad sugi walal? Kolkaad aqoon yeelatay, matahay mid bulshadiisa caawiyay mise waxaad ku jirtaa kuwa ismahadiyay? Walaalayaal, 5 sanoo la soo dhaafay wax abadan ayaan soo qabanay oo lagu faani karo haseyeeshee, inta Maandeeq gacan shisheeye inooga jirto waa inaan gacmaha isqabsannaa, wada tashannaa, wada tilaabsannaa, u gudo galnaa hawlaha halganka inooga aadan inagoo udhan isla mar ahaanataan ka hawl galno soo saarkii jiilkii mustaqbal ee hanan lahaa Ogadenya.
Gunaanudkii, waxaan markale u Hambaliyeen ururka OYSU iyo Xubnihiisa qaaliga ah, waxaana Alle uga rajayn in sanaddan sanaddeeda dhulkooda oo xor ah ku dabaal dagaan iyana noqdaan kuwii loo baxasado ee loo aayo Inshallah. Waxaan sidoo klae umahad celin Masuuliyiinta iyo Xubnaha ururka ee firfircooni iyo wadaniyad dhab ah muujiyay sanaddii la soo dhaafay. Waxaan idin leeyahay Guulaysta oo halkaa ka sii wada wadaniyadda iyo dadaalka, Halgamayaal.
Xoghayaha Guud ee OYSU